I-RAMpage, isiphazamisi esibucayi esithinta yonke i-Android eyenziwe ngemuva kuka-2012 | Izindaba zamagajethi
Kubukeka sengathi namhlanje ayikho inkampani ezinikele emhlabeni wezobuchwepheshe engakhululekile ukwethula noma yiluphi uhlobo lohlelo noma ipulatifomu engenakho ukwehluleka. Kulesi senzakalo kufanele sikhulume ngokwehluleka okusha okubucayi lokho ithinta ngokoqobo yonke ifoni ye-Android eyenziwe kusuka ngo-2012 kuze kube namuhla.
Ngaphandle kokungabaza sibhekene nokushaywa kanzima epulatifomu, okuthi, khumbula, kungenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni wonke ngenxa yokwamukelwa okukhulu ukuthi, selokhu ifikile emakethe, inabakhiqizi abaningi yamadivayisi eselula. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngobungozi obutholakele ohlelweni lokusebenza oludumile olwakhiwe futhi lwakhiwa i-Google, ngikumema ukuthi uqhubeke nathi.
1 I-RAMpage, ukuba sengozini kwe-Android okuthinta izigidi zamafoni emhlabeni
2 I-Google kufanele isebenze kusixazululo se-RAMpage namuhla
3 Ayikho imibiko yokuthi i-RAMpage ibanga ukungahleleki phakathi kwabasebenzisi
I-RAMpage, ukuba sengozini kwe-Android okuthinta izigidi zamafoni emhlabeni
Ngaphansi kwegama lika I-RAMpage Ukwehluleka okukhulu, okubucayi kuvela lapho, njengoba sishilo, kuthinta ingxenye enkulu yamatheminali namuhla asasetshenziswa cishe nsuku zonke yizigidi zabasebenzisi. Inkinga ngalokhu kusengozini akuyona enye into ngaphandle kokuthi umsebenzisi othuthukile angasebenzisa ngokunenzuzo iphutha lelo ivumela ukufinyelela nokuguqula idatha yangasese yomnikazi wefoni ye-Android ngamamojula wememori ye-RAM yedivayisi uqobo.
Ukungena emininingwaneni ethe xaxa, ngikutshele ukuthi i-RAMpage bug itholwe yiqembu labacwaningi elinamalungu ayisishiyagalombili, njengoba kukhombisile, ukwazile ukudala ukuxhashazwa okwaziyo ukusebenzisa lobu bungozi ku-LG G4. Njengoba kushiwo ku-e. isitatimende abasethule, ngokusobala noma isiphi isiginali esenziwe kusukela ngo-2012 kuze kube namuhla kungenzeka sivezwe kuleli phutha lohlelo lokusebenza uqobo, iphutha elingajwayelekile esigungwini esithile ngoba akuyona inkinga yezingxenyekazi zekhompyutha.
I-Google kufanele isebenze kusixazululo se-RAMpage namuhla
Lokhu kuyiqiniso impela ukuthi leli phutha alikho ngenxa yehadiwe elenziwe ngumkhiqizi othile, okusho ukuthi ngokoqobo izigidi zamatheminali zivezwe kuleli phutha elibucayi. Kuyiqiniso futhi ukuthi, ngenxa yokuthi kungenxa yokwehluleka kohlelo olusebenzayo ngokwalo olwenziwe iGoogle, kungalungiswa ngendlela esheshayo ngokubikezela ngokusungula ukuvuselelwa kokuphepha. Njengoba abacwaningi abaphethe ukwazisa i-RAMpage bephawule:
I-RAMpage yephula ukwahlukaniswa okubaluleke kakhulu phakathi kwezicelo zomsebenzisi nohlelo lokusebenza. Ngenkathi izinhlelo zokusebenza ngokuvamile zingenayo imvume yokufunda idatha kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza, uhlelo olubi lungakha ukuxhashazwa kwe-RAMpage ukuthola ukulawula kokuphatha nokubamba izimfihlo ezigcinwe kudivayisi.
Ayikho imibiko yokuthi i-RAMpage ibanga ukungahleleki phakathi kwabasebenzisi
Njengoba kubikwe yiqembu labacwaningi abathole le bug ebalulekile ye-Android, ngokusobala I-RAMpage kufanele ithathwe ngokungathi sína kakhulu kunalokho esivame ukukwenza nalezi zinhlobo zezinkinga., kwesinye isikhathi, ngenxa yemvamisa yayo. Umsebenzisi onolwazi angahlehlisa amaphasiwedi, izithombe zomuntu siqu, ama-imeyili, imiyalezo kuzicelo kanye nemibhalo ebucayi kakhulu egcinwe esigungwini.
Ngithi kufanele uqaphele kakhulu ngalokhu kuba sengozini ngoba, ngokusobala, okwamanje asikho isixazululo sokuphepha esivela ku-Google ekwazi ukuqeda le nkinga. Okwamanje, esikwaziyo nje ukuthi abacwaningi sebeyazisile inkampani yaseMelika futhi, ngethemba lokuthi ngenxa yezigidi zabasebenzisi, ukuthi isisombululo sale nkinga singafika ngokushesha okukhulu.
Mhlawumbe futhi njengengxenye enhle sithola ukuthi, okungenani okwesikhashana, ayikho imibiko yokuthi kungahle kube nokuhlaselwa okube khona esimeni esingaphezu kwalesi esenziwe esivivinyweni sedemo yithimba labaphenyi elithole i-RAMpage ngakho-ke asibhekene nokwephulwa kwezokuphepha okudala ukuphazamiseka phakathi kwabasebenzisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-RAMpage, isiphazamisi esibucayi esithinta yonke i-Android eyenziwe ngemuva kuka-2012
Izindaba ezivela ku-HBO neMovistar + zikaJulayi 2018